Counselling Corner Myanmar - Counselling Corner မှ ဒီဇင်ဘာလအတွက် သတင်းခေါင်းစဉ် - Children & teenagers, end of the year reflection and toxic positivity
Posted on ဒီဇင်ဘာ 9, 2021 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 7, 2022 | မှတ်ချက်များ မရှိပါ။
Children & teenagers, end of the year reflection and toxic positivity
ကျွန်ပ်တို့၏သတင်းလွှာသည် သင့်မိသားစု၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့် သင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးကူညီမှု အနည်းငယ် အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ခုလို စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ ရှုပ်ထွေးမှုတွေများနေတဲ့ အခြေအနေမှာ အားလုံးစိတ်ရော၊ ကိုယ်ပါ ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်စေဖို့တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ကနေကူညီနိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့ရုံးကို တနင်္ဂလာနေ့မှ စနေနေ့အထိဖွင့်လှစ်ထားရှိပါတယ် (အကယ်၍ ရုံးပိတ်ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ တွေမှာလိုအပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လဲ ဆက်သွယ်နိုင်လို့ရနိုင်ပါတယ်။) ရုံးဖွင့်ရက်မှာဆိုရင် Counsellor နဲ့ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်စေ၊ Online Zoom meeting ဖြင့်ဖြစ်စေ တွေ့ဆုံနိုင်ပါတယ်ဗျ။
ရုံးလိပ်စာကတော့ – အမှတ် ၅/၉၊ ပထမထပ်၊ ဘိုကလေးဈေးလမ်း (အောက်ဘလောက်)၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
2 hours free workshop that will benefit your child, your teenager and yourself!
ဆယ်ကျော်သက်များ၊ သင် နှင့် သင့် ကလေးတွေအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် (Workshops) (၂) နာရီကြာ ဆွေးနွေးပွဲများ။
ကျွန်တော်တို့ အပတ်စဉ်လုပ်နေကျ Free Emotional Workshops ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိတဲ့ အကြောင်း၊ အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (ညနေ ၆-၈ နာရီ) အချိန်မှာ မတူတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့လုပ်ပေးလျက်ရှိတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကိုလဲ စိတ်ဝင်စား သူတွေတက်ရောက်နိုင်ဖို့ အတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာလေးကတော့ ကလေးတွေအတွက်၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်ပြီး သူများအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ကောင်းမွန်မှုရရှိအောင်၊ သိရှိသင့်တဲ့ အကြောင်းလေးဖြစ်ပါ တယ်။ သင်နှင့် သင့်ချစ်ရသောသူများအတွက် ရုပ်ပိုင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညီတူညီမျှ ကျန်းမာပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တည်ဆောက်နိုင်အောင်လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်နော်။
ဒီဇင်ဘာ (၈) ရက်နေ့အတွက် –
ကလေးများ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်များ။ (Mental development stages of children (mental, physical))
ဒီဇင်ဘာ (၁၅) ရက်နေ့အတွက် –
ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် ၎င်းတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်များ ကိုနားလည်ခြင်း (Understanding teenagers & their mental stage)
ဒီဇင်ဘာ (၂၂) ရက်နေ့အတွက် –
ကလေးဘဝရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေဟာ အရွယ်ရောက်လာချိန် (လူကြီးဘဝ) ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေရှိသလဲ။ (How childhood stress effects on adulthood (attachment theory))
ကလေးတွေအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုများကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်း စီမံမလဲ (မိဘအုပ်ထိန်းမှု အမျိုးအစား (၄)မျိုး) (How to manage stress for children (4 types of parenting))
အထက်ဖော်ပြပါ (Workshops) ဆွေးနွေးပွဲတွေအားလုံးကို အခမဲ့ ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်လို့ စိတ်ဝင်စား သူများအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook Page မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်။ လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားတာဖြစ်လို့၊ အပတ်စဉ်တိုင်း အသစ်တင်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့ Counselling Corner Facebook Page (our Facebook page.) ကို See First လုပ်ထားကြပါနော်။
Counselling Corner မှ Counsellors အသစ်များ
Counselling Corner ကို လွန်ခဲ့တဲ့ (၃) နှစ်က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် လိုအပ်သူများအတွက် နှစ်သိမ့်၊ ဆွေးနွေးပေးမှုများကို တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်သိမ့်၊ ဆွေးနွေး၊ အကြံပေးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းများမရှိသေးပါ (စိတ်ပညာနှင့်စိတ်ရောဂါ ပိုင်းဆိုင် တစ်ခုတည်းသာလျှင်ဖြစ်ပြီး)၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ပါဝင်စားသူများအတွက် ကိုယ်တိုင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီး ၎င်းတို့အား လက်တွေ့သင်ခန်းစာများအပြင် စဉ်ဆက်မပြတ်ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ဖို့ Assignment များကို ပြုလုပ်စေခြင်း၊ ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ထားသောအရာများကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်လည် ဆင်ခြင်သုံးသပ်စေသည့် အလေ့အကျင့်များကို ကြီးကြပ်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် Professional Counsellor တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ရန် ထိုနည်းများဖြင့်ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။
ထူးချွန်သော နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးအကြံပေးသူ Counsellors (၃) ဦးသည် ကျွန်တော်တို့၏ လေ့ကျင့်မှု ၊ နည်းပြ သင်ခန်းစာများကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့သည့်အပြင် Counselling Corner ၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအဖြစ် လေ့ကျင့်မှု ဟောပြောပွဲ၊ ဆွေးနွေးပွဲများတွင်လည်းကူညီပေးခဲ့ပြီး ယခုတွင် Counselling Corner မှ အချိန်ပိုင်း Counsellors များအဖြစ်ဝင်ရောက်အားဖြည့်ကူညီသွားမည့်ကြောင်း သတင်းကောင်းလေးပေး ပါရစေခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ဘက်မှ Counsellors အသစ်လေးတွေဖြစ်တဲ့ Yu Mar Thinn, Marlo နှင့် Julie Moenge San တို့အား နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ Website မှာ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
လစဉ် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိတဲ့ အခြေခံ နှစ်သိမ့်၊ ဆွေးနွေးမှု ကျွမ်းကျင်ဆိုင်ရာ သင်တန်းကို လာမယ့် တနင်္ဂလာနေ့ ဒီဇင်ဘာ (13) ရက်နေ့မှာ ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နေရာအနည်းငယ်ကျန်နေသေးသည့်အတွက် တက်ရောက်ချင်သူများ တက်ရောက်နိုင်အောင် ဒီလခ့်မှာ Basic Counselling Skills Training – Batch 17 အမြန်စာရင်းပေးသွင်းလိုက်ပါနော်။ သင်တန်းကြေးအနေနဲ့ (၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်) သာကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားပါကဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Phone: 09 664 017 251, 09 784 509 916
Corporate clients တွေအတွက် – Christmas မှာ လက်ဆောင်တစ်ခုအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စိတ်ကုထုံး၊ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှု ပညာရပ်များကို စိတ်ဝင်စားသူ တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် Scholarship အနေနဲ့ ပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့် ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဗျ။
ဆက်သွယ်ရမယ့်အီးမေလ်းလိပ်စာ – edwin@counsellingcornermyanmar.com
ဒီဇင်ဘာ- တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတွက် ပြန်လည်တွေးတောဆင်ခြင်ရန်အကောင်းဆုံးလ
တစ်နှစ်တာရဲ့နောက်ဆုံလဟာ ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သင် နှင့် သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအားလုံးအပြင် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစား ချက်များ ထိခိုက်လွယ်ခဲ့သော နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့တာ သိသိသာသာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ယခုလ ဒီဇင်ဘာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတွက် သင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသမျှစိတ်ခံစားချက်များအကြောင်းကို တွေးတော ဆင်ခြင်ရန် နှင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် အချိန်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းကို တစ်ဦးချင်းနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှု အပြင် အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးမှုများဖြင့်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ၏လူမှုအဖွဲ့စည်း အခြေအနေအရ အဖွဲ့လိုက် (၂၀ ယောက်စာ) စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုများ စီစဉ်ခြင်းက အမှန်တကယ်ပို၍ထိရောက်မှုရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သတိထားမိပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲဆိုရင်ဖြင့် လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို တွေးပြီးပြောဆိုဖို့ အခွင့်အရေးအပြင် သူတို့နဲ့ရွယ်တူချင်းတွေမှာ အလားတူခံစားချက်တွေရှိနေကြောင်းသိရပြီး သူတို့အတွက် ချက်ချင်းဆိုသလို စိတ်သက်သာရာရစေ သည့်အပြင် တစ်ခြားသူတွေရဲ့ အားပေးမှုကိုလည်းခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ စကားပြောဆိုခြင်းထက် တီထွင်ဖန်တီးမှု တစ်ခုခု လုပ်တာက သင့်အတွက် ပိုကောင်းတယ်လို့ထင် ပါကလဲ Counselling Corner ကနေပြီးတော့ Art Workshop လေးတွေလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ (Online မှတစ်ဆင့် (သို့) သင့်နေရာ ကုမ္ပဏီ တွင်လဲ ကိုယ်တွေ့လာရောက် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်)။ ကျွန်ုပ်တို့က ပါဝင်သူများ ရေးဆွဲရန်လိုအပ်သည်များကို ထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးမှုတွင် ပါဝင်သူ တစ်ဦးချင်းစီ တိုင်းကို မိမိတို့ပြုလုပ်သော အနုပညာလက်ရာများတွင် ၎င်းတို့၏ခံစားချက်များကို ဖော်ပြပေးရန်တောင်းဆို ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Counsellor များက ဆွေးနွေးပွဲကို အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ပါဝင်သူများအား အဘယ်ကြောင့်ဤပုံကို ဖန်တီးခဲ့သနည်း၊ ၎င်းပုံနှင့်ပတ်သက်၍ ပါဝင်သူ၏ စိတ်ခံစားချက် များကို အဖွဲ့တွင် ရှင်းပြစေခြင်းဖြင့် ဤ အနုပညာလုပ်ဆောင်ဆွေးနွေးမှုကို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လာမယ့် (၂၀၂၂) ခုနှစ်မှာ သင်နှင့်သင့်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်လင်မှု၊ ခိုင်မာမှု အခြေအနေတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်လိုက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Reimagining workplace happiness engagement – article Scott Coates
လုပ်ငန်းခွင် ပျော်ရွင်မှုများကို ပြန်လည်ပုံဖော်ခြင်း – Scott Coates ၏ ဆောင်းပါး
ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ခဏခဏဖတ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါ – အဲဆောင်းပါးက အမှန်တကယ်တော့ ယခုမြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေရ စီမံခန့်ခွဲမှုပြုလုပ်နေသူတိုင်း သိသင့်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ လုပ်ငန်းခွင် ပျော်ရွင်မှုအကြောင်း Scott Coates ၏ ဆောင်းပါးကို ဖတ်တဲ့အခါ အဲတာကို တွေးမိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးအပြည့်အစုံကို ဖော်ပြပါ Link မှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျာ (read the full article here). အဲဆောင်းပါးမှာဆိုရင် ဘယ်ကုမ္ပဏီအတွက်မဆိုလိုအပ်လျက်ရှိတဲ့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်း၊ အလုပ်သမားတွေအပေါ် စာနာထောက်ထားမှုကို ပြသခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကို တည်ဆောက်ခြင်းစတဲ့ အကြောင်းတွေကို ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းပါးရှိ အခြားကောက်နုတ်ချက်များ –
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအပေါ်ထိရောက်သောယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းသည် စိတ်ဖိစီးမှုကို 74% လျော့ချနိုင်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းအားရလဒ် 50% မြင့်လာခြင်း၊ ဖျားနာနိုင်ခြေ 13% လျော့နည်းခြင်း နှင့် ပါဝင်ဆက်နွယ်နိုင်မှု 76% ပိုမိုလာမည်ဖြစ်ကြောင်း။
မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းတွင်မဆို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုသည် အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ကြောင်း – အကြံဉာဏ် ကောင်းများကို သက်တောင့်သက်သာ လွတ်လပ်စွာ မျှဝေပြောဆိုနိုင်သည်ဟု သင်ခံစားရခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ပြော ဆိုခြင်းနှင့် သင့်ပုံစံအတိုင်း သင်နေခြင်းသည် အောင်မြင်သော အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်လာစေရန်အရေးကြီးဆုံးသော အချက်တစ်ခုဖြစ်သည် စသည့်အကြောင်း။
ဝန်ထမ်းများသည် ကောင်းမွန်သော နေ့ရက်များ နှင့် အလွန်ကြီးကျယ်သောနေ့ရက်များကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူများဖြစ်ကြောင်းသူဌေးတစ်ဦးအနေဖြင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းသည် အရေးကြီးကြောင်း။
ဝန်ထမ်းများ၏သုခ ချမ်းသာကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးပေးခြင်းသည် “ပုံမှန်အသစ်တစ်ဖန်” ဖြစ်လာရန်မုချ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည့်အကြောင်း။
စာနာမှုပြခြင်း၊ သင့်အဖွဲ့များကို အမှန်တကယ် ဂရုစိုက်ခြင်းသည်အမျိုးမျိုးသော ပုံစံဖြစ်နိုင်ပါသည်။
လေ့ကျင်ခန်းများလုပ်ဆောင်ရေးတွင်မြှင့်တင်ခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းခွင်အနီး စိမ်းလမ်းသောနေရာ များထားရှိခြင်း။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ဆက်သွယ်မှုများစွာကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပါသည်။
လုပ်ဖော်ကိုင်များကြားတွင် အလုပ်နှင့်မသက်ဆိုင် သောစကားဝိုင်းများ မပြောဆိုပဲ ပေါ့ပေါ့ပါး ပါးပြောဆိုနိုင်ရန်အတွက် နေရာဖန်တီးပေးခြင်း
ကုမ္ပဏီနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ခြေခံတန်ဖိုးများကိုနားလည်ပြီး၎င်းနှင့်အညီနေထိုင်ခြင်း စသည့်အကြောင်းအရာများကို ဖတ်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါးအပြည့်အစုံကိုဖတ်ပြီး- Reimagining workplace happiness engagement သင့်ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအကောင်ထည်ဖော်လိုက်ပါနော်။
1 Jan 2021: Toxic positivity workshop
သင်ငိုချင်ငိုနိုင်တယ်၊ သင့်စိတ်ခံစားမှုဖော်ပြတာ၊ အားနည်းချက်ကို ပြသတာမျိုးဟာလဲ ကောင်းပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူး (၁ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၂) ရက်နေ့မှာ အကောင်းမြင်လွန်းခြင်းအပေါ်ဖြစ်ပေါ်တတ်သောအဆိပ်သင့်မှု ဆွေးနွေးပွဲကို လုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဗျာ။ ၎င်းဆွေးနွေးပွဲကို Counselor Su ကနေပြုလုပ်ပေးသွာ’မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်က သူမဒီအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေး နွေးပေးခဲ့ဖူးပါတယ်၊ အဲအချိန်တုန်းက သူမပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာ “သင်သည် အမြဲ အကောင်းမြင်တတ်သူ (သို့) သန်မာသူ ဖြစ်နေရန် မလိုအပ်ဘူး” စတဲ့စကားလုံးဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အတွက် အလွန်အံ့အားသင့်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သူမ ရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ အပြုသဘောဆောင် အကောင်းမြင်စိတ်တွေများလွန်းပြီး စိတ်ခံစားချက်တွေကိုထွက်ခွင့်မပေးခြင်းဟာ သင့်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ် တွေက သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ စိတ်ဝိဉာဉ်အတွင်း နေရာယူပြီးအမှန်တကယ် ကြီးမားတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာ တွေဖြစ်လာစေမှာပါ။
ဒီဆွေးနွေးမှုမှာ ပါဝင်လိုက်ပါ, အထူးသဖြင့် နှစ်သစ်မှာ သင့်ကိုယ်သင်ဂရုစိုက်ဖို့ဟာ အင်မတန်မှအရေးကြီး ပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို အခမဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်လို့ စိတ်ဝင်စားသူများအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook Page ကို See First လုပ်ထားပါနော်။ ဆွေးနွေးပွဲလေးကိုတော့ နှစ်သစ်ကူး (၁ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၂) ရက်၊ စနေနေ့ နေ့လည် (၂-၄ နာရီ) အတွင်း Online Zoom ဖြင့်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြောင်းအရာ အပြည့်အစုံကို ဖတ်ရှုလို့ရအောင် အောက်က စာစောင်တွေကို download လုပ်နိုင်ပါတယ်နော်။
English – download online in English
မြန်မာ – Myanmar language
စာစောင်ထဲမှာဆိုရင်ယေဘုယျအားဖြင့် Counselling နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းပြထားပြီး၊ လျို့ဝှက်ရေးရာ ဆိုင်ရာအကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ပေးသောသင်တန်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး ပညာရှင်များ၊ တစ်ဦးချင်း ဆွေးနွေးမှုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်သောအားပေးပါဝင်သောလုပဆောင်မှုများအပြင် အခြားသော Counselling Corner ရှိလုပ်ဆောင်မှုများအကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖြေကြားရှင်းလင်းဖော်ပြ ထားပါသည်။
Share / Like လုပ်ခြင်းအားဖြင့် အားပေးနိုင်သလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အထက်ပါအကြောင်းအရာများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်သိလိုသည်၊ အကြံပေးလိုသည်များရှိပါက စုံစမ်းဆက်သွယ်မေးမြန်း နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူတွေပြောရတာပိုမို လွယ်ကူ စေချင်သည့်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးကိုလဲ မိမိတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်း စိတ်ကျန်းမာရေး အကြောင်းကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုနိုင်ဖို့၊ ပိုမိုတိုးတက်လာစေဖို့အတွက် သင်တို့ရဲ့ ကူအညီများလိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။
← Counselling Corner Newsletter (November 2021)
Intermediate Counselling Skills Training →